ဖုန်းထဲမှာ လက်လွန်ပြီး မှားဖျက်မိတဲ့ data တွေကိုဘယ်လို ပြန်ရယူနိုင်မလဲ???? – For her myanmar
ဖုန်းထဲမှာ လက်လွန်ပြီး မှားဖျက်မိတဲ့ data တွေကိုဘယ်လို ပြန်ရယူနိုင်မလဲ????
Posted on March 19, 2019 March 19, 2019 Author Phyu Thant	Comment(0)
ပြာကလပ်စိန်ယောင်းတို့အတွက် ကျိန်းသေအသုံးဝင်မှာပါ 🥰🥰
ဓာတ်ပုံဆိုတာ ဘဝရဲ့အမှတ်တရအချိန်လေးတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်သလို အရေးကြီးအချက်အလက် သိမ်းထားတဲ့ဖိုင်တွေ ၊ အသံဖိုင်တွေကလည်း ပြန်အစားထိုးလို့မရနိုင်တော့တာမို့ မှားဖျက်မိသွားပြီဆိုရင် အသည်းတယားယားနဲ့ ဝမ်းနည်းလို့မဆုံးဖြစ်ကျန်ခဲ့ရတာတွေ ကြုံဖူးကြတယ်ဟုတ်။ ပြန်လုပ်ယူဖို့ဆိုတာ တော်တော်မလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စလို့ အရင်ကထင်ခဲ့ပေမဲ့ အဲ့ဒီလို ဖုန်းမှာမှားဖျက်မိတဲ့ Video တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ Application တွေ၊ အသံဖိုင်တွေကိုပြန်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်နော်။
ပြန်ယူလို့ရတဲ့ Application တွေ များစွာရှိပေမဲ့လည်း အခုပြောပြမယ့် App လေးကတော့ သုံးရတာလွယ်ကူပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘာ app များလဲလို့ သိချင်နေကြပြီဟုတ်။ RecycleMaster ဆိုတဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်။
စဖွင့်လိုက်ရင်တော့ အောက်နားလေးမှာလည်း ဖျက်ထားမိတဲ့ data တွေကို ရွေးချယ်လို့ရအောင် ပြထားပေးပါတယ်။
ပုံလေးတွေကို ထောက်လိုက်ရင်တော့ Recover နဲ့ Remove ဆိုပြီး နှစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ယောင်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။
Setting ထဲမှာ ဖျက်မိတဲ့ပုံတွေကို Notification ပြအောင်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။
File Types To Recycle ထဲမှာတော့ ပြန်မလိုချင်တဲ့ File တွေကို ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်။
Auto clear ကတော့ ရက်အလိုက်ရွေးချယ်လို့ရသလို ပိတ်ထားလို့လည်းရပါတယ်။
Change Language က ဘာသာစကားပြောင်းချင်ရင်ပြောင်းလို့ရပြီးတော့
Security ထဲကAdd Lock to App ကတော့ Password ထားပြီး Application ကိုတခြားလူတွေ ဝင်မကြည့်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်နော်။
Deep Recovery ကတော့ ဖျက်ထားတာအချိန်ကြာနေတဲ့ ဖိုင်တွေကိုရှာပေးနိုင်ပါတယ်။
ဖျက်မိထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ၊ ဗီဒီယိုတွေ ၊ အသံဖိုင်တွေ၊ Application တွေ အားလုံးကို ပြန်ရှာပေးမှာဖြစ်ပြီးလိုချင်တဲ့ File ကိုရွေးပြီး Recovery ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်။
ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရောင်လေးတွေ နဲ့ Theme လေးပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်။
နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ယောင်းတို့အနေနဲ့ မှားဖျက်မိတဲ့ data တွေကို အလွယ်တကူပြန်ယူလို့ရနိုင်ပြီဆိုတော့ ဘယ်လောက်တောင်ကျေနပ်ဖို့ကောင်းလိုက်သလဲ။ မသိသေးတဲ့ ယောင်းလေးတွေကိုပြန်မျှဝေပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
ပွာကလပျစိနျယောငျးတို့အတှကျ ကြိနျးသအေသုံးဝငျမှာပါ 🥰🥰
ဓာတျပုံဆိုတာ ဘဝရဲ့အမှတျတရအခြိနျလေးတှကေို မှတျတမျးတငျထားတာဖွဈသလို အရေးကွီးအခကျြအလကျ သိမျးထားတဲ့ဖိုငျတှေ ၊ အသံဖိုငျတှကေလညျး ပွနျအစားထိုးလို့မရနိုငျတော့တာမို့ မှားဖကျြမိသှားပွီဆိုရငျ အသညျးတယားယားနဲ့ ဝမျးနညျးလို့မဆုံးဖွဈကနျြခဲ့ရတာတှေ ကွုံဖူးကွတယျဟုတျ။ ပွနျလုပျယူဖို့ဆိုတာ တျောတျောမလှယျကူတဲ့ကိစ်စလို့ အရငျကထငျခဲ့ပမေဲ့ အဲ့ဒီလို ဖုနျးမှာမှားဖကျြမိတဲ့ Video တှေ၊ ဓာတျပုံတှေ၊ Application တှေ၊ အသံဖိုငျတှကေိုပွနျယူလို့ရနိုငျပါတယျနျော။
ပွနျယူလို့ရတဲ့ Application တှေ မြားစှာရှိပမေဲ့လညျး အခုပွောပွမယျ့ App လေးကတော့ သုံးရတာလှယျကူပွီး အဆငျပွပေါတယျ။ ဘာ app မြားလဲလို့ သိခငျြနကွေပွီဟုတျ။ RecycleMaster ဆိုတဲ့ application လေးဖွဈပါတယျ။
စဖှငျ့လိုကျရငျတော့ အောကျနားလေးမှာလဲ ဖကျြထားမိတဲ့ data တှကေို ရှေးခယျြလို့ရအောငျ ပွထားပေးပါတယျ။
ပုံလေးတှကေို ထောကျလိုကျရငျတော့ Recover နဲ့ Remove ဆိုပွီး နှဈခုပျေါလာပါလိမျ့မယျ။ ယောငျးတို့ကွိုကျနှဈသကျရာ ရှေးခယျြလို့ရပါတယျ။
Setting ထဲမှာ ဖကျြမိတဲ့ပုံတှကေို Notification ပွအောငျရှေးခယျြလို့ရပါတယျ။
File Types To Recycle ထဲမှာတော့ ပွနျမလိုခငျြတဲ့ File တှကေို ပိတျထားလို့ရပါတယျ။ Auto clear ကတော့ ရကျအလိုကျရှေးခယျြလို့ရသလို ပိတျထားလို့လဲရပါတယျ။
Change Language က ဘာသာစကားပွောငျးခငျြရငျပွောငျးလို့ရပွီးတော့Security>Add Lock to App ကတော့ Password ထားပွီး Application ကိုတဈခွားလူတှေ ဝငျမကွညျ့အောငျ ပွုလုပျလို့ရပါတယျနျော။
Deep Recovery ကတော့ ဖကျြထားတာအခြိနျကွာနတေဲ့ ဖိုငျတှကေိုရှာပေးနိုငျပါတယျ။
ဖကျြမိထားတဲ့ ဓါတျပုံ၊ Video၊ အသံဖိုငျတှေ၊ Application တှေ အားလုံးကို ပွနျရှာပေးမှာဖွဈပွီးလိုခငျြတဲ့ File ကိုရှေးပွီး Recovery ပွနျလုပျလို့ရပါတယျ။
ကွိုကျနှဈသကျရာ အရောငျလေးတှေ နဲ့ Theme လေးပွောငျးလို့ရပါသေးတယျ။
နညျးပညာတှတေိုးတကျလာတဲ့ခတျေကွီးမှာ ယောငျးတို့အနနေဲ့ မှားဖကျြမိတဲ့ data တှကေို အလှယျတကူပွနျယူလို့ရနိုငျပွီဆိုတော့ ဘယျလောကျတောငျကနြေပျဖို့ကောငျးလိုကျသလဲ။ မသိသေးတဲ့ ယောငျးလေးတှကေိုပွနျမြှဝပေေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
Tagged data, Knowledge, Master, Photo, recovery, recycle, technology, Theme, video, voice
Posted on July 21, 2017 May 6, 2019 Author Christina Rosy
ညဘက်တွေအိပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုလုပ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာမှမရှိပါဘဲ ယောင်းတို့နားမှာ တစ်ယောက်ယောက်ရှိတယ်လို့များ ခံစားနေရသလား။ ဒါက ယောင်းစိတ်ထင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ပါ.. သိချင်ရင် ဖတ်ကြည့်ကြနော်….
Rinတို့အချစ်တော် ခွေးလေးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါ တချို့အသည်းနှလုံးမရှိ ပျော်ရွှင်မှုကဘာဆိုတာမသိတဲ့လူတွေက Rinတို့ကိုလှောင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်?
“ဟယ်ကြည့်ပါအုံး ခွေးကိုများ သားလေးသမီးလည်းခေါ်ပြီး အဖြစ်သည်းနေလိုက်တာ” ဘာညာလှောင်ခံရတယ်။
ယောင်းက အလုပ်နဲ့ဘဝ ညီမျှတဲ့လူတစ်ယောက်လား ?
အဆီလည်းမတက်၊ စားလို့လည်းကောင်းတဲ့ ထိုင်းစတိုင် ချဉ်ငံစပ် ဝက်သားသုပ်